#3 စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မှု | Mycanvas
အလုပ်လုပ်ကိုင်သောသူတွေဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရန်အမြဲတမ်းလိုအပ်ပါတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသင်ယူထားတာကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးနိုင်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ သင်ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားလေ့လာပါစေ သင်ခန်းစာတွေကသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမတိုးတက်စေဘူးဆိုရင် အရာမထင်ပါဘူး။
ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကိုလည်းတက်ကြွစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း လက်တွေ့လေ့ကျင့်တဲ့စာအုပ်များကိုဖတ်ပြီး လိုက်လံလုပ်ဆောင်ရုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ စကားလုံးများကိုအလွတ်ကျက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) သင်္ချာကဲ့သို့သောဖြေရှင်းခြင်းနည်းများကို အလေးအနက်စဉ်းစားခြင်းတွေကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် The General Theory of Employment, Interest, and Money, John Maynard Keynes ကဲ့သို့ အရမ်းခက်ခဲတဲ့စာအုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်…
သေချာတာတစ်ခုကတော့ အဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်လေ့လာဖို့ကူညီပေးတဲ့ “ဆရာ” ကိုရှာဖို့လိုပါတယ်။ စီးပွားရေးသမားတွေဟာ Business School တွေကသာ သင်ယူမှုစွမ်းရည်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်ကြပေမယ်လည်း ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်မှာ အသုံးဝင်တဲ့ Information တွေကို Online ကနေလည်းရှာဖွေလေ့လာလို့ရတဲ့အတွက် ပိုက်ဆံအများကြီးအကုန်ကျခံစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အရေးကြီးတဲ့အချက်က ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုဆက်လက်လေ့လာနိုင်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေကနေတစ်ဆင့်လေ့လာသင်ယူပြီး သူတို့ဟာသင်အားစိုက်ထုတ်ဖို့အတွက် အားပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုတိုးတက်စေမယ့် သင်ရဲ့ “ကိုယ်ပိုင် ဆရာ” ကိုရှာလိုက်ကြရအောင်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရနိုင်တဲ့သင်တန်းတွေ၊ စာမေးပွဲတွေများပါတယ်။ သင်လည်းအဲ့လိုစာမေးပွဲတွေဖြေဖူးမှာပါ။ ဒါပေမယ့်အဲ့လိုစာမေးပွဲတွေကျွန်ုပ်တို့ဘာလို့ဖြေကြတာလဲ? Certificate ရဖို့အတွက်ပဲလား? တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Certificate က သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာ အနည်းဆုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုပြပါတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက သင့်အလုပ်မှာ သင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကိုဘယ်လိုကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Certification Exam တွေက အသုံးအဝင်ဘူးလား? အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Certificate တွေမှာ စာမေးပွဲရဲ့နေ့စွဲရှိတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို လေ့ကျင့်အောင်လှုံ့ဆော်မှုပေးဖို့ Study Plan တွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒါတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားခဲ့ရတာတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။